वर्षको एक महिना पानीभित्रबाट प्रकट हुने गाउँ
काठमाडौं – भारतको गोवमा एउटा गाउँ वर्षको ११ महिना पानीभित्र हुन्छ भने जम्मा एक महिना पानीबाहिर देखिन्छ ।
११ महिना अर्को ठाउँमा गएर बस्ने गाउँलेहरू एक महिनाका लागि यहाँ आउँछन् र उत्सव मनाउँछन् ।
पश्चिमी घाटका दुईवटा पहाडको बीचमा रहेको कुदी गाउँ सालोलिम नदीको किनारमा पर्छ ।
दक्षिणपूर्वी गोवाको यो गाउँ पहिला निकै जीवन्त थियो ।
तर सन् १९८६ मा गाउँलेहरूले यो ठाउँ छोडेर जानुपरेको थियो । राज्यले बाँध बनाएपछि गाउँ डुबेको थियो ।
तर हरेक वर्षको मे महिनामा पानी घटेपछि गाउँ देखिन थाल्छ ।
गाउँको भग्नावशेष, बिग्रेका घरेलु सरसामान र पानीले भरिएका साना तलाउको बीचमा बाँझो खेत यहाँको दृश्य हो ।
यहाँको बाँझो जमीन कुनै बेलामा निकै ऊर्वर थियो । गाउँको जनसंख्या लगभग तीन हजार थियो । मानिसहरू धानखेती गर्थे अनि नरिवल, काजु, आँप र कटहरका बोट पनि हुन्थे ।
त्यहाँ हिन्दू, मुसलमान र क्रिस्चियनहरू सँगै बस्थे । त्यहाँ एउटा मुख्य मन्दिरबाहेक साना साना अनेकौं मन्दिर, एउटा चर्च र एउटा मस्जिद पनि थिए ।
सन् १९६१ मा पोर्चुगिजहरूबाट स्वतन्त्र भएपछि परिवर्तन आयो ।
पहिलो मुख्यमन्त्री दयानन्द बान्दोडकरले गाउँ भ्रमण गरे अनि बाँध बनाउने योजना बनाए । उनले गाउँलेहरूलाई बोलाएर बाँध बनाउन दक्षिणी गोवालाई फाइदा हुन्छ भनी सम्झाए ।
यो अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी योजना थियो । सालोलिम नदीको किनारामा बाँध बनाइने हुँदा यसलाई सलोलिम सिँचाइ परियोजना नाम दिइयो ।
त्यतिखेर परियोजनाबाट पिउने पानी, सिँचाइ र औद्योगिक आवश्यकताका लागि पानी उपलब्ध गराइने भनिएको भए पनि अहिलेसम्म त्यसलाई पूरा गरिएको थिएन ।
यसबाट ४० करोड लिटर पानी प्रत्येक दिन पाइने भनिएको थियो ।
तर कुदी गाउँका मानिस बसेको ठाउँमा बाँधको पानी पुग्न सकेन ।
मे महिनामा पानी घट्दा कुदीका मूल निवासीहरू आफ्नो घर हेर्न आउँछन् ।
क्रिस्चियनहरू चर्चमा भेला हुन्छन् र हिन्दूहरू मन्दिरमा उत्सव मनाउन थाल्छन् ।
गोवाकी समाजशास्त्री वेनिशा फर्नान्डिजका अनुसार, कुदीका मानिसका लागि जमीन नै पहिचानको माध्यम थियो । उनीहरू गहिरो गरी जमीनसँग जोडिएका थिए । त्यसैले उनीहरू गाउँलाई एकदमै याद गर्छन् र त्यहाँ पुगिरहन्छन् ।’
प्रेमिकालाई पानीमुनि गएर प्रपोज गर्ने व्यक्तिको त्यही पानीमा डुबेर मृत्यु (भिडियो)
यस कार्यालयका कर्मचारी आफैं बढाउँछन् तलब, बोसले गर्दैनन् हस्तक्षेप
वृद्धलाई एमआरआई मशिनमा राखेर बिर्सिए प्राविधिकले, गाह्रो परेपछि आफैं निस्किए
जापानमा पाइन्छ सबभन्दा पुरानो र महंगो कफी
निकै खतरनाक छ यो माछा, छोयो मात्र भने पनि गलाइदिन्छ छाला
नेपालबाट हराएका पाकिस्तानी कर्नलको फेरि चर्चा किन चल्यो ?
परिमार्जन भयो पत्रकार आचारसंहिता, किन गरियो परिमार्जन ? काठमाडौं – पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको स्वर्ण जयन्तीका अवसरमा काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ र नेपाल पत्रका...
शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न शिक्षक र कर्मचारीलाई ल्यापटप वितरण
सुदूर र कर्णालीको संस्कृति झल्किने एकल नृत्य साँझ काठमाडौंमा हुँदै, ‘हिमाल देउडा रत्न’ घोषणा
प्रसिद्ध बेलायती टूर कम्पनी टमस कूक डुब्यो, कसरी आयो यो स्थिति ?
मोदीको प्रश‌ंसा गर्दै ट्रम्पले भने– उनमा आत्मीयता पाएको छु